2020 मा युवा लगानीकर्ताहरूको लागि लगानी गर्न क्रिप्टोकरन्सीहरू - Shiv's Era
2020 मा युवा लगानीकर्ताहरूको लागि लगानी गर्न क्रिप्टोकरन्सीहरू
-पोल्काडोट सबैभन्दा स्केलेबल क्रिप्टो मध्ये एक हो, यसले लामो समयको लागि ठूलो लगानी बनाउँछ
-बिटकोइनको मूल्य २०२१ मा गगनचुम्बी थियो तर सफलता अल्पकालीन थियो। शिबा शिबा एक राम्रो लगानी हो किनभने यसमा अधिक स्थिरता र स्थिरता छ
– क्रिप्टोकरेन्सीहरू युवा लगानीकर्ताहरूको लागि सम्पत्ति लगानीको प्राथमिक छनोट हो, र पोल्काडोट त्यहाँको उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो।
10 उत्कृष्ट क्रिप्टोहरू तपाईंले लगानी गर्नुपर्छ र लामो दूरीको लागि होल्ड गर्नुपर्छ
क्रिप्टोकरेन्सीहरू युवा लगानीकर्ताहरूको लागि सम्पत्ति लगानीको प्राथमिक छनौट भएको छ। दीर्घकालीन लगानीका लागि छनौट गरिएका क्रिप्टोहरू सामान्यतया उच्च लगानी दर, उच्च व्यापारिक मात्रा र तरलता भएका हुन्। हामीले यस मार्चमा किन्न र समात्नका लागि शीर्ष १० उत्कृष्ट क्रिप्टोकरेन्सीहरू सूचीबद्ध गरेका छौं।
गोल्डेन बिटकोइन क्रिप्टोकरन्सी
के Bitcoin Skyrocket फेरि 2019 मा जस्तै हुनेछ?
Bitcoin लेनदेनहरू सुरक्षित र धोखाधडीहरूबाट सुरक्षित राख्न प्रमाण-अफ-वर्क भनिने प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ। Bitcoin को मूल्य 2021 मा फिर्ता गगनचुम्बी भयो, तर सफलता अल्पकालिक थियो र BTC वैगनबाट खसे। Bitcoin मार्च 2022 मा किन्न र होल्ड गर्नको लागि उत्तम क्रिप्टोकरेन्सी साबित हुन सक्छ।
Ripple के हो? यहाँ स्टार्टअप बारे जान्न सबै कुरा छ
XRP मुद्रा हो जुन RippleNet भनिने डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्ममा चल्छ। टोकन Ripple द्वारा SWIFT जस्ता अवस्थित मौद्रिक भुक्तानी प्लेटफर्महरूको लागि द्रुत, कम खर्चिलो, र थप मापनयोग्य विकल्पको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो। XRP लेजर लेनदेन लगभग 3-5 सेकेन्ड भित्र प्रक्रिया गर्न सक्छ।
Ethereum सह-संस्थापक भन्छन् “Ethereum 2.0” 2022 मा आउँदैछ
मार्केट क्यापको हिसाबले बिटकोइन पछिको दोस्रो ठूलो क्रिप्टोकरेन्सी इथरियम हो। विनिमय स्वचालनको रूपमा यसको मुख्य कार्य भनेको नौकरशाही अवरोधहरू कम गर्नु र दुई पक्षहरूलाई मध्यस्थ बिना सम्झौता गर्न सक्षम पार्नु हो।
Binance Coin (BNB) ले मे २०२२ मा खरिद गर्न र होल्ड गर्न शीर्ष १० क्रिप्टोकरेन्सीमा आफ्नो नेतृत्व विस्तार गर्यो
Binance Coin cryptocurrency को रूप हो जुन लगानीकर्ताहरूले Binance मा व्यापार गर्न र शुल्क तिर्न प्रयोग गर्न सक्छन्, संसारको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू मध्ये एक। BNB ले मार्च 2022 मा खरिद गर्न र समात्न शीर्ष 10 क्रिप्टोकरेन्सीहरू मध्ये आफ्नो स्थिति कायम राखेको छ।
टेराको क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफर्मको अल्फा प्रक्षेपण
टेरा स्टेबलकोइनहरूको लागि ब्लकचेन भुक्तानी प्लेटफर्म हो जुन दुई प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीहरू बीच सन्तुलन राख्नमा निर्भर हुन्छ। टेरा-समर्थित स्टेबलकोइनहरू भौतिक मुद्राहरूको मूल्यसँग जोडिएका छन्। यसको काउन्टरवेट, LUNA, टेरा प्लेटफर्मलाई समर्थन गर्दछ र थप टेरा स्टेबलकोइनहरू मिन्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Cardano: विश्वको तेस्रो ठूलो सार्वजनिक ब्लकचेनको लागि एक शुरुआती गाइड
Cardano एक सार्वजनिक ब्लकचेन प्लेटफर्म हो जसले पियर-टु-पियर लेनदेनको सुविधा दिन्छ। प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताहरूलाई विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू प्रोग्राम गर्न अनुमति दिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्बाध रूपमा लेनदेन प्रमाणित गर्न सक्षम बनाउँछ।
२०२२ मा हेर्नको लागि सबैभन्दा आशाजनक क्रिप्टोकरेन्सीहरू
सोलानाले एक वर्षदेखि मितिको आधारमा १५,००० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेको छ। यो 2022 मा प्रभाव पार्ने सबै भन्दा राम्रो क्रिप्टोकरेन्सीहरू मध्ये एक हो। कुनै पनि सम्पत्ति जसले केही महिनामा US$1 बिलियन बजार पूँजीकरणबाट US$70 बिलियन भन्दा बढीमा विस्तार गर्छ, पक्कै पनि तपाइँको नजर राख्नु पर्छ।
हिमस्खलनले ब्लकचेन खेल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्छ
हिमस्खलन एक तह एक ब्लकचेन हो जसले विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगहरू र अनुकूलन ब्लकचेन नेटवर्कहरूको लागि प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दछ। यसले स्मार्ट अनुबंधहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय ब्लकचेन अनसेट गर्ने लक्ष्य राख्छ। हिमस्खलनले प्रति सेकेन्ड 6,500 लेनदेनको उच्च लेनदेन आउटपुट गर्ने लक्ष्य राख्छ।
यस हालको बजारमा, पोल्काडोट लगानी गर्नका लागि उत्तम क्रिप्टोकरन्सीहरू मध्ये एक हो
पोल्काडोट क्रिप्टो बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेन्सीहरू मध्ये एक हो। कम शुल्क र उच्च गतिले यसलाई क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूको लागि नम्बर एक विकल्प बनाउँछ। स्केलेबिलिटीको कुरा गर्दा यो सम्भवतः बाँकी मध्ये सबै भन्दा राम्रो हो।
आत्म-घोषित Dogecoin हत्यारा एक क्रिप्टो घोटाला हो: र यी अद्भुत मानिसहरूले यो आउँदै गरेको देखे
स्वघोषित Dogecoin Killer ले 2021 मा अविश्वसनीय लाभहरू पोस्ट गर्यो। यो वर्षको सुरुमा US$0.000000000077 को मूल्यमा बस्यो। त्यतिबेला धेरै क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूले सिक्कामा चासो राखेका थिएनन्।